Ihe niile ị chọrọ ịma iji lelee TV na gam akporo | Gam akporosis
Pablo Aparicio | | Ngwa gam akporo, Nkuzi
Ebe ọ bụ na smartphones dị gburugburu, ihe anyị masịrị nwere ike igwu ọdịnaya multimedia na ha. N'ime ọdịnaya ọdịnaya a anyị nwere egwu, ihe anyị nwere ike ịge ntị ugbu a tupu ọdịdị nke smartphones n'onwe ha, ihe nkiri ma ọ bụ, ihe post a bụ, lelee TV na ntanetị n'efu na Spanish. Nke a enwere ike? Azịza dị nkenke ma dị mfe bụ ee dị mfe. Azịza toro ogologo bụkwa ee, mana na-adọta site na ngwa, ibe weebụ yana ngwaọrụ ndị ọzọ.
Na nke a, anyị ga-akụziri gị ihe niile ịchọrọ iji lelee igwe onyonyo na ngwaọrụ gam akporo. O yikarịrị ka n'etiti ozi anyị ga-enye n'okpuru enwere ọtụtụ ihe ị maraworị, mana ọ bụghị ndị ọrụ niile nwere otu ihe ọmụma na n'ezie na ọbụna ozi ahụ bara uru nye mmadụ. Anyị hapụrụ gị obere ndụmọdụ na obere ndụmọdụ maka ikiri TV na gam akporo.
1 Esi lelee TV na gam akporo
2 Ngwa egwu na-ekiri TV dị ndụ n'efu na gam akporo
2.3 Egwuregwu amamihe
3 Live Spanish telivishọn maka gam akporo
3.1 Lee Spain DTT na gam akporo
4 Ebe nrụọrụ weebụ na-ekiri telivishọn na ntanetị
4.2 Ibe ndị ọzọ iji lelee TV
5 Ngwa ikiri TV na gam akporo na-enweghị Intaneti
Esi lelee TV na gam akporo
Ekele maka mmeghe nke sistemụ arụmọrụ Google, lelee TV na gam akporo ọ ga-ekwe omume n'ọtụtụ ụzọ na ụzọ dịgasị iche iche. Ihe kachasị mfe ga-abụ iji ngwa sitere na Playlọ Ahịa Google Play, mana ọ ga-ekwe omume ịlele ọdịnaya a site na ụfọdụ ibe weebụ yana ọbụlagodi iji DTT mpụga. Anyị ga-ekwu banyere nke ikpeazụ dị ka ozi, mana ọ bụghị nke kachasị mma n'ọtụtụ ikpe.
Ọ dịkwa m mkpa ikwu na isi ihe ndị dị n'okpuru ebe a sitere gbara ajụjụ nke I mere anyị, ya mere anyị dere ha ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ, ọ bụ ezie na ọtụtụ n'ime ihe ngwọta ahụ bụ otu ihe na isi ihe ndị ọzọ. Site na nkọwa a, ọ bara uru ịgụ akwụkwọ niile iji hụ na ị kwụsịghị ịgụ ihe masịrị gị.
Ngwa egwu na-ekiri TV dị ndụ n'efu na gam akporo
N'ime ndị a anyị ga-enwe ọtụtụ mana, dịka ọ dị n'ihe banyere TVE, echere m na ikiri TV dị ndụ na nkwa ọ bara uru ịme ya tupu ngwa ngwa. N'ime ngwa ndị a, anyị ga-enweta nke TVE, agbakwunye na isi ihe na ihe ndị a:
ATRESplayer: Usoro na akụkọ
Na nke atọ gara aga na nke dị n'akụkụ na-esote, echere m na anyị gaara ekpuchiworị isi ụzọ na Spain. Mana ama m na ọ bụghị naanị Spen bụ mba n'ụwa, yabụ m ga-agbakwunye ọzọ uzo ozo. Otu ndụmọdụ nke nwere ike ịrụ ọrụ n'ụwa niile bụ ịchọ ngwa ngwa ndị ọchịchị ka m si jiri isi ụzọ na Spain. N'aka nke ọzọ, enwere ngwa ndị ọzọ na-atọ ụtọ dịka ndị a:
Kodi bu ihe ọkpụkpọ mgbasa ozi anyị kacha masị anyị, ma ihu ala bụ na ọ dịghị mfe iji ya. Iji malite, anyị nwere ike ịgụ mgbe niile post anyị Etu esi eji Kodi, ihe ọkpụkpọ mgbasa ozi gam akporo zuru ezu. Dịka ị pụrụ ịhụ, ị ​​nwere ike ịhụ ọwa nke ụdị dị iche iche na n'akụkụ ụwa niile, mana ị ga-agbadata ịrụ ọrụ iji nweta ya.
Ọ bụrụ na anyị na-achọ ngwa iji lelee TV nke na-akwado ma ghara ime ka o siere anyị ike nke ukwuu, Zattoo kwesịkwara ya. Ihe jọgburu onwe ya m na-ahụ bụ na ikiri ụfọdụ ọwa ị ga-akwụ ụgwọ, mana opekata mpe anyị nwere ike lee igwe onyonyo n’efu na mba anyị.
Wiseplay bụkwa ngwa dị ike nke ga-enyere anyị aka ibu Wiseplay ma ọ bụ M3U anatara. Nsogbu ndị anyị ga - ahụ ga - abụrịrị na anyị ga - achọ ihe ndị a edepụtara iji mee ka ọ rụọ ọrụ mana, ozugbo achọtara, ọ bara uru. Ihe Wiseplay na-enye anyị dị ka ibe dị ka LaTeLeTe.Tv na-enye anyị, mana nnukwu ihe dị iche na anyị agaghị adabere na ihe nchọgharị na Flash, nke na-apụtakarị na anyị ga-agafe nwayọ na ibe. Anọ m na-eji Wiseplay eme ihe ogologo oge ma enwere m mmasị na ya nke na akwụgoro m ụdị Pro ahụ.
Ga-achọkwa download ndepụta WisePlay 2017 ma ọ bụ afọ ndị sochirinụ. Ga-ahụ ha na njikọ nke anyị hapụrụ gị.
Wiseplay: Onye ọkpụkpọ vidiyo
Developer: Egwuregwu amamihe
Live Spanish telivishọn maka gam akporo
Oburu na ihe anyi nwere mmasi ihu bu TVE, odighi uru ka anyi tinye onwe anyi. Redio Televisión Española nwere ngwa nke aka ya na Playlọ Ahịa Google Play, yabụ kedu uru ọ bara ịchọ ụzọ ọzọ? Na nke a, anyị enweela ọtụtụ ndị ọzọ, ma n'ụdị ngwa nke ndị ọzọ na ụdị nke ibe weebụ, mana ọ nweghị onye n'ime ha ga-arụ ọrụ yana ngwa ọrụ gọọmentị nke na-ekwe nkwa nnweta ya na arụmọrụ ya enweghị nkwụsị.
Lee Spain DTT na gam akporo
Ndụmọdụ a bụ otu n’ime aghụghọ, ọ bụrụhaala na ihe ịchọrọ gbochie ezigbo akara ngosi DTT. Ọ bụrụ na nke a abụghị ikpe n'ihi na ị nwere njikọ ịntanetị, anyị nwere ike ịhụ isi dị ka nke Ngwa iji lelee igwe onyonyo na gam akporo ma ọ bụ nke na-esote, Ebe nrụọrụ weebụ na-ekiri telivishọn na ntanetị. Ọ bụrụ na ịnweghị ịntanetị ma anyị ga-achọ ilele TV site na akara ngosi DTT, ihe ị ga - eme bụ ile anya na njedebe ikpeazụ nke post a, mana rịba ama na ọ ga - adị mkpa ịzụta ngwaọrụ mpụga iji nwee ike gee ntị na DTT, ihe m na-akwadoghị ma ọ bụ n'ihi na m nwalere ọtụtụ antenna na, ọ bụrụ na anyị anọghị nso obodo, ihe kachasị anyị ga-ahụ bụ 5 ma ọ bụ 6 nke ọwa pere mpe kachasị mma ... belụsọ nnata nwere ike jikọọ na mgbidi poolu.
Ebe nrụọrụ weebụ na-ekiri telivishọn na ntanetị
Etinyeghị m ya na mbụ, mana ikekwe nke a bụ isi ihe kachasị amasị m iji nwee ike ile televishọn na gam akporo. Teknụzụ, ọ nwere ike bụrụ ihe na-atọ ụtọ na ngwaọrụ ọ bụla nwere ike ịme ihe nchọgharị weebụ enyere Flash. Dịka m kwuchara, ihe nzuzo bụ ikiri televishọn site na ihe nchọgharị weebụ, yabụ ọ bụ naanị ka amara ma ọ bụ mara ibe weebụ ile TV n'ịntanetị, dị ka ihe ndị a:
Lee aha: weebụsaịtị a bụ "latelete.tv", ọbụghị "latele.tv" dịka ụfọdụ ndị ọrụ si achọ. Ọ bụrụ na anyị gbalịa ịnweta weebụsaịtị nke abụọ, ihe anyị ga-eme bụ ịnweta weebụsaịtị nke na-eche ka mmadụ zụta ngalaba ahụ; Ọ bụrụ na anyị abanye na nke mbụ, anyị ga-abanye n'otu n'ime weebụsaịtị kacha mma iji lelee telivishọn n'ịntanetị. LaTeLeTe.Tv, nke dị site na ebe a, nwere ngụkọta nke, ma ọ bụrụ na akaụntụ adịghị ada m ma ọ bụrụ na ha etinyeghị mbipụta ọ bụla, Ọwa Spanish 112 dị.
N'ezie, a ghaghi iburu n'uche nke ahụ ibe weebụ ndị a na-ebi na mgbasa ozi, ya mere, dịka ọ dị na ibe weebụ niile yiri ya, ọ ga-abụ na anyị ga-egwu "pịa X" site n'oge ruo n'oge, ya bụ, mechie mgbasa ozi nke gosipụtara na ihuenyo. Anyị kwesịkwara iburu n'uche na ọ ga-abụ na ụfọdụ ọwa dị ala, mana nke ahụ nwekwara ike ime na ngwa ọ bụla na-akwadoghị ile ihe nkiri telivishọn.
Ibe ndị ọzọ iji lelee TV
Ghara ịgbatị post a nke ukwuu, n'okpuru m ga-agbakwunye ọtụtụ njikọ na ọtụtụ weebụsaịtị kachasị mma iji lelee igwe onyonyo site na ngwaọrụ ọ bụla nwere ihe nchọgharị weebụ Flash Player dakọtara:
My Online Tele.
Lee bụ n'efu.
N'ime ibe weebụ ise gara aga anyị nwere ike ikwu otu ihe ahụ nke LaTeLeTe.Tv: anyị nwere ike ịchọta ọtụtụ mgbasa ozi, na-enweghị usoro mgbasa ozi na-aga were were yana ụfọdụ ọwa kwụsịrị, n'agbanyeghị na weebụsaịtị ndị a na-agbakwunye njikọ ọhụrụ ozugbo ha chọpụtara nke ha ji.
Ngwa ikiri TV na gam akporo na-enweghị Intaneti
Dịka m kọwaworo, aga m ekwu okwu banyere nke a ntakịrị karịa n'ihi na enwere ike, ọ bụ ezie na ọ bụ ihe kachasị gbagwojuru anya ma eleghị anya ọ kachasị ọnụ. Ihe mbụ bụ ime ka o doo anya na ọ dịghị ngwa na-ekiri TV na-enweghị internetMana oghere gam akporo na-enye ohere ka onye ọ bụla na-emepụta ma ọ bụ onye nrụpụta mepụta ngwaahịa ndị dakọtara na sistemụ arụmọrụ Google. Banyere DTT, anyị nwere ike ịzụta tuner nke anyị ga-ejikọ na ngwaọrụ gam akporo anyị ka o wee nata akara ngosi DTT n'ezie, ya bụ, otu akara ahụ a na-enweta telivishọn ndị nkịtị.
Otu ihe atụ bụ D-Njikọ DWM-T100, ihe anyị nwere ike ịkọwa dịka nkwụnye ka DTT mgbaama wee banye na ngwaọrụ gam akporo anyị. Ngwaọrụ a nwere mpi nke ya nke anyị ga-ejikọ na njedebe nke ọzọ na nke anyị ga-ejikọ na ngwaọrụ gam akporo. N'ime obere ọdụ ụgbọ mmiri a, anyị nwere ike ijikọ antenna niile, site na obere dị ka redio na eriri dị ka TV, nke pụtara na anyị nwere ike ijikọ ngwaọrụ gam akporo anyị na mgbidi dị ka a ga - asị na ọ bụ TV ma lelee otu ọwa ahụ anyị ga-ahụ na telivishọn anyị. Nke a ga-adịrị anyị mma karị ma ọ bụrụ na anyị na-aga mpaghara na-enweghị ịntanetị ma ọ bụ TV, mana nwere oghere mgbidi.
Onye obula nke ndi DTT anyi natara ga-abata na ngwanrọ nke ya inwe ike ikiri telivishọn, ọ bụrụ na ọ bụghị otu anyị ga-esi lee ya? N’otu akpa nke onye nata ya rutere, ntuziaka ka anyị lelee TV ga-abịarukwa, nke na-atụgharịkarị na nbudata ngwa ha gwara anyị, sitere na fromlọ Ahịa Google ma ọ bụ site na ibe weebụ ha nyere anyị, ihe nwekwara ike ime site na iji koodu QR. Dị ka m kwuru, ọ nwere ike ịdị irè, mana dịkwa mgbagwoju anya ma dịkwa oke ọnụ. N'ezie, atụmatụ D-Link bịara na ahịa nwere ọnụahịa ihe dị ka € 50.
You nwere ajụjụ ọ bụla gbasara otu esi ekiri TV na gam akporo?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Ihe niile ị chọrọ ịma iji lelee TV na gam akporo
Ozi 5 kacha mma Instagram nke afọ gara aga